Soomaali ka cabaneysa Kolared | Somaliska
Midka ka mid ah dadka ku jira xabsi ku yaal Kolared oo u dhow magaalada Göteborg oo nala soo xiriiray ayaa cabasho ka muujiyay xaalada goobtaas asagoo sheegay in aysan wax cunin mudo 3 maalmood ah. Dadka ku jira xabsiga ayuu ku sheegay 20 Soomaali ah iyo dad jinsiyado kale u dhashay asagoo intaas ku daray in booliska ay si xun ula dhaqmaan. Ninkaan cabashada noo soo diray ayaa sheegay in aysan dambi galin balse qaarkood ay ka yimaadeen Talyaaniga iyo Malta asagoo sheegay si aan sax ahayn in loola dhaqmo oo la jir dilo oo qaarkood ay xabsiga ku jireen mudo dheer. Waxa uu sheegay in aysan wax celis ahna ku haysan wax xoriyad ahna ku haysan asagoo codsi u diray bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan Sweden gaar ahaan magaalada Göteborg in ay la soo gaaraan caawimaad deg deg ah oo gacan loo fidiyo. Hadaba cidii dooneysa in ay gacan u fidiso dadkaas ha nala soo xiriireen si aan idinkugu xirno.
Midka ka mid ah dadka ku jira xabsi ku yaal Kolared oo u dhow magaalada Göteborg oo nala soo xiriiray ayaa cabasho ka muujiyay xaalada goobtaas asagoo sheegay in aysan wax cunin mudo 3 maalmood ah. Dadka ku jira xabsiga ayuu ku sheegay 20 Soomaali ah iyo dad jinsiyado kale u dhashay asagoo intaas ku daray in booliska ay si xun ula dhaqmaan.
Ninkaan cabashada noo soo diray ayaa sheegay in aysan dambi galin balse qaarkood ay ka yimaadeen Talyaaniga iyo Malta asagoo sheegay si aan sax ahayn in loola dhaqmo oo la jir dilo oo qaarkood ay xabsiga ku jireen mudo dheer. Waxa uu sheegay in aysan wax celis ahna ku haysan wax xoriyad ahna ku haysan asagoo codsi u diray bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan Sweden gaar ahaan magaalada Göteborg in ay la soo gaaraan caawimaad deg deg ah oo gacan loo fidiyo.
Hadaba cidii dooneysa in ay gacan u fidiso dadkaas ha nala soo xiriireen si aan idinkugu xirno.